कोरोना नियन्त्रणमा उदास बलेफि, स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा खेलवाड – SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ स्वास्थ्य/शिक्षा ∕ कोरोना नियन्त्रणमा उदास बलेफि, स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा खेलवाड
कोरोना नियन्त्रणमा उदास बलेफि, स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा खेलवाड
सिन्धु खबर असोज २६, २०७७ गते १०:३१ मा प्रकाशित
लामोसाँघु । सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहहरुले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि लाखौं खर्च गरिरहँदा पनि केही स्थानीय तहले संक्रमित नागरिकहरुको स्वास्थ्य माथि पटक्कै ध्यान दिएको पाइन्न । कोरोना संक्रमित वयक्तिहरुलाई कसरी अस्पतालसम्म पुर्याउने भन्ने सामान्य कुराको व्यवस्थापनमा समेत स्थानीय तहहरु चुकेका छन् । जसको परिणाम स्वरुप एम्बुलेन्स नपाएर कहिले गाडीको पछाडि बसेर अस्पतासम्म जानुपर्ने त कहिले २/३ दिनसम्म कोभिड संक्रमित बिरामी घरमै थुनिनु परेको कुराले समेत प्रष्ट पारेको छ ।
बलेफी गाँउपालिकाले कोभिड १९ संक्रमित भएकाहरुको व्यवस्थापनमा उचित चासो नदिएको आरोप लागेको छ । गाँउपालिकामा दर्जनको संख्यामा कोभिड १९ संक्रमित देखिएपनि रोकथाममा लाग्नु पर्ने गाउँपालिका र वडा कार्यालय नै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय ज्ञानेन्द्र कुमार नेपालका अनुसार वडा नम्बर ७ को पूराना गाँउमा केही ब्यक्तिलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि अन्य स्थानीय समेत त्रासमा छन् । कोरोना पोजेटिभ देखिएका ब्यक्तिलाई लामो समय ज्वरो आएको र उनले गाउँमा रहँदा धेरै जनासँग भेटघाट गरेकाले अन्यमा पनि संक्रमण भयो कि भन्ने स्थानीयलाई त्रास भएको हो ।
स्थानीय धेरैलाई पनि ज्वरो र रुघाखोकीले सताएको छ । तर स्थानीयको स्वास्थ्यप्रति न गाउँपालिका न वडा कोहीले ध्यान दिएको देखिदैन । के कारण त्यहाँ रुखा र ज्वरो फैलिएको छ भनेर बुझ्न न वडाका प्रतिनिधि आए न गाउँपालिकाका नै । यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मी समेत नखटाएर स्थानीयको स्वास्थ्य अवस्थामाथि खेलवाड गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
कोभिड १९ संक्रमित कुन अबस्थामा छन् ? उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था के छ ? भनेर रोकथाम र उपचारमा लाग्नु पर्ने गाँउपालिका र वडा कार्यालयलाई आफ्ना नागरिकहरुबारे कुनै ध्यान नदिएकोप्रति स्थानीय नेपालले आक्रोश पोखे । कोरोना भित्रभित्रै भूसको आगोजस्तै सल्किएको छ न परीक्षण छ न उपचारको राम्रो व्यवस्था नै, उनले भने । `स्थानीय केही व्यक्तिलाई कोरोना देखिएपछि गाउँ नै त्रासमा छ नेपालले भने, संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर स्वाब संकलन गरि पिसिआर परीक्षण गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।`
स्थानीय बजारमा सामाजिक दुरी कायम नगरी, स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाइ व्यापार व्यवसाय गरेको पाइन्छ । त्यसमा जनचेतना फैलाउने, केहीलाई कारवाही गर्ने तदारुकता स्थानीय सरकार र प्रशासनले गर्न सके केही मात्रामा भएपनि कोरोनाबाट बच्न सकिन्थ्यो खाडिचौरका स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् । दशैको मुखमा बजारहरुमा मान्छेको चहलपहल बढ्न थालेको छ । यो चहलपहललाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारले सचेतनामुलक कामहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर स्थानीय सरकार सब कुराको बेवास्था गरी कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले पनि गाँउपालिकाभरका नागरिकको स्वास्थ अबस्था बारे ख्याल राख्न स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेता अमृत अधिकारीले गाउँपालिका भरका नागरिकको स्वास्थ अबस्थाबारे तत्काल ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ कार्यालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ अधिकृत दुर्गादत्त चापागाँईले संक्रमण भएको स्थानमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी स्वाब संकलन गरिने बताए । गाँउपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले असोज २७ गते पूराना गाँउमा जोखिममा रहेका स्थानीयहरुको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइने बताए ।